Digniin khatar ah 2.Xog wadaag.
Friday December 25, 2020 - 22:38:22 in Wararka by Mogadishu Times
Maanta 25/12/2020.waxa jiro Khatar aan ka walwalsanahay Alla ha naga hayo. 36 Qof oo ah Shaqaale Somaliyeed oo Shibil ah oo Aqoon Kororsi loogu diray Dalka Ugandha ayaa waxaa u soo dhamaady Seminar waqti gaaban. Shaqaalhaa 23 waxa ey ka socdeen Fed
Maanta 25/12/2020.waxa jiro Khatar aan ka walwalsanahay Alla ha naga hayo. 36 Qof oo ah Shaqaale Somaliyeed oo Shibil ah oo Aqoon Kororsi loogu diray Dalka Ugandha ayaa waxaa u soo dhamaady Seminar waqti gaaban. Shaqaalhaa 23 waxa ey ka socdeen Federaalka 13 na Maamul gobaleedyada. intooda badan Axadii hore ayeey Soo baxeen.
Intii eyna Dalka Dib ugu soo noqon ayaa Mid ka mid ah laga helay Cudurka Covid 19, si aan looga reebin Safarka ayaa ……Baaritaan kale lagu celiyay si loo yiraa ma qabo Cudurkaa. Haddana mid kale ayaa laga helay. farsamo lama waayo, ……. kuwa yar oo meela kale soo maray ayaa Maanta 25/12/2020 Dalka ku soo laabanyaan sida Qorshuhu ahaa.
waan ogahay Arrintaan wasaaradda dirtay Shaqaalaha iyo Dowladuba masuul kama ahan dhacdadan, waxaase laga filayay feejignaan iyo taxadar.
waxaan ka codsanayaa 36daa walaalaheena ah, iyo Rakaabkii maanta la soo safray in ey iska Baaraan Cudurkaa mar kale , Muddo 7 cisho ahna eyna Shaqada ku laaban. Bal aan wada hubino sida wax u jiraan.
Iska ilaali Barafuunka Hoos kaaga muuqdo, waxaa soo dhamaaday Baaritaan lagu hubinayay , waxaa loo iib geeyay 7 wadan oo Muslim ah Somaliya kuma jirto ilaa hadda, laakin si shakhsi ah ama ganacsi waa ku soo gali karaa Dalka, waxaa la ogaaday marka aad isku buufiso in uuna khatar muuqato leheyn, laakin Maalma yar kadib marka uu jirka galo in Dadka qaarkood ey ku dhimanayaan 3 illa 8 cisho gudahood, xanuun kadis ah oo aan la aqoon, sida Baaritaanka lagu sheegay. Khatartu waa badan tahay ,Alla ha naga ilaaliyo Aamiin.
F.G: wixii iga khaldan ka sax, Arragtidaadu waa muhim.